Ngeke uthole umsebenzi esisemthethweni kodwa abe umthombo okwanele eqondile yokuziphilisa, okungukuthi, wena - ngezokuvakasha? Uma lokhu isitatimende weqiniso ukuze balwe nawe, awuwedwa neze. Ukuthuthukiswa kwe-Internet kuye kwaholela amathuba amasha abazisebenzako. Abantu abaningi e-Russia banenkinga efana neyami noma inzuzo (kuncike wakho umbono, ukunamathela). Ngakolunye uhlangothi - lena inkululeko (ukuthatha iholidi noma kunini uma ufuna, akudingekile ukuba lithathe uhambo nsuku zonke ehhovisi emuva, asikho isidingo sokwenza zonke ayo, ukuze uxhumane iziphathimandla nezinye izinzuzo eziningi).
Uma ubheka ngakolunye uhlangothi - isidingo njalo ufune amakhasimende (siqala nge izinga elithile amakhasimende akufuna ukuba wenze), asikho isiqinisekiso sokukhokha (Usengozini enkulu yini ukuthi "nokujikijela", kodwa kungenzeka ukuba ezingeni), isidingo evuthiwe ukuzithiba (fixed umsebenzi schedule nokunakwa umphathi uthatha lolu daba ehhovisi), hhayi "ukhuluma isipiliyoni" (uma usebenzisa iminikelo "vchornuyu" kungukuthi isidonswa yesikhwama sempesheni, okusho ukuthi iminyaka 55-60, ungakwazi asale engenalo engenayo).
Kodwa zonke izici ezingezinhle freelancing singadambisa. Namuhla sizoxoxa kuphela omunye wabo. Kungakhathaliseki umuntu uthi, futhi impesheni olusemthethweni - umthombo yibhange imali. Ake uqale nge yokuthi awuzange ngizibuza indlela ukuthola SNILS, ngenxa yokuthi usemusha. Ngokwemvelo, akudingekile ukuba ancike impesheni sokuguga, ngokuba khona evamile, isibonelo, ukuze ukuhamba, kuba kuncane kakhulu. Ukuze wenze lokhu, ngesikhathi okufanele sizinakekele ukubhalisa wonke amadokhumenti (okungenani iminyaka engu-30-35), bese umbuzo kanjani ukwazi SNILS, hhayi wena hlathi amnyama. Kodwa, njengoba zokubuyela emuva, ukudweba impesheni awukwazi ubuhlungu.
Okokuqala, njengoba kudingekile ngokomthetho ejenti intela. Ngoba ngaphandle lowo mbuzo, wazi kanjani SNILS yakho ngeke kuphakama nhlobo. Ngenxa yale njongo ukubhalisa SP. Uma ukusebenzisa ku intela kanye, ungakwazi ukukhokha ifemu yomthetho futhi uzokwenza konke ngawe.
Self-Ukubhaliswa IP eqala izindleko ezilandelayo:
1. Umsebenzi obekwe umbuso e inani ruble 800.
2. amasevisi ummeli olungisa izivumelwano - ruble 300 (kuye ngokuthi esifundeni, kusukela 2011, uma ukuqasha imibhalo uqobo qinisa isignesha akudingekile).
3. Phrinta - ruble 400.
4. Ukuvula i-akhawunti zamanje ebhange - ruble 500.
Uma kungenjalo, kungenzeka yokubhalisa ezimele le-IP, okuhlanganisa izinyathelo ezimbalwa:
1. Khetha uhlelo engcono intela. Kuyinto kunenzuzo kakhulu uma mkhakha womsebenzi - amasevisi - sts - 6% emholweni.
2. Thola INN (ugcwalise wendawo isitatimende isevisi intela futhi Uqasha).
3. Senza kukhethwa NACE amakhodi. Udinga ukukhetha kuze kube izingcezu ikhodi 20, ngoba uma ufuna ukwengeza amakhodi kamuva, kuzothatha ngempela asemrarweni. Amakhodi incike izinga tariff ezingozi (by NS FSS).
4. Sikhonza isicelo sokubhalisa IP bentela yendawo. (E-Moscow, lokhu 46-th intela igunya). Ngokusho imiphumela lokusebenza zibhaliswe Pension Fund, okuyinto SNILS (okuyinto afakiwe idatha kuyo yonke iminikelo engenayo) inikezwa. Ngemva kwalokho ungase ubuze, wazi kanjani SNILS.
5. Khokhela inkokhelo isimo ku-Sberbank (ruble 800) ku irisidi ethathwe intela.
6. Ngokushesha Sikhonza isitatimende USN.
Uma kahle iyawakha uhlu kwemibhalo, umbuzo kanjani ukuthola SNILS yakho, akubonakali eziyinkimbinkimbi kangaka, akunjalo?.
Uhlu imibhalo for ukuzithoba intela:
- Isicelo sokubhalisa IP
- Ikhophi INN
- Xerox passport ne imvume yokuba yisakhamuzi
- Irisidi Imali yokukhokha
- Isicelo USN
Zingakadluli izinsuku ezinhlanu kumelwe akhiphe izibambiso ezilandelayo:
- OGRN (isitifiketi sokubhaliswa isimo wena njengoba SP)
- Khipha kwi ebhukwini elilodwa IP
- Ifomu 2-3 Accounting
- Isaziso ukuthi ebhaliswe indawo Pension Fund we Russian Federation. Ngazi kanjani le SNILS inombolo, wena ingayala ke.
Ngemva kwalokho, baqala ukusebenza sinokuthula, siqiniseka esikhathini esizayo alo, proplachivaya zonke izintela kanye nezimali (kuhlanganise PF) izimali ezihlukahlukene ngokuvumelana ikhalenda (ngemininingwane zingatholakala kumasayithi ezikhethekile). Futhi kamuva, umbuzo ukwazi ukuthi SNILS, ngeke kukwenze ukungakhululeki. Siyakwamukela ezinhlwini bentela.
Kuphi futhi kanjani ukuze uthole SNILS eMoscow
Amakhowe Black. Salting abandayo kanye hot-